Encarni Arcoya – Creativos Online https://www.creativosonline.org Famolavolana sary sy famolavolana tranonkala Fri, 08 Mey 2021 11:42:22 +0000 es isan'ora	1	https://wordpress.org/?v=5.7.1 https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/05/cropped-favicon-150x150.png Encarni Arcoya – Creativos Online https://www.creativosonline.org 32 32 Ahoana ny fomba fanaovana sary famantarana https://www.creativosonline.org/como-hacer-un-logo.html https://www.creativosonline.org/como-hacer-un-logo.html#respond Fri, 08 Mey 2021 18:22:48 +0000 https://www.creativosonline.org/?p=52384
Por eso, no solo vamos a enseñarte aquí ny fomba fanaovana sary famantarana, sino que te vamos a hablar de todo lo que debes tener en cuenta a la hora de crearlo para que tu diseño sea el mejor de todos.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miresaka a imagen representativa de una marca, empresa, producto, etc. que permite identificar ese objeto o empresa con lo que hace o el nombre. Por ejemplo, cuando pensamos en Coca-Cola, Nesquik, Nutella, McDonald’s… son marcas y empresas, y a nuestra cabeza llegan los logos, que son con los que los identificamos.
ara-dalàna, el proceso que se sigue es el siguiente:
fa si lo que buscas es un logo profesional y que se vea bien, hacerlo con los programas es lo mejor.
]]> https://www.creativosonline.org/como-hacer-un-logo.html/feed 0 Volon-kazo https://www.creativosonline.org/textura-madera.html https://www.creativosonline.org/textura-madera.html#respond Fri, 08 Mey 2021 10:33:22 +0000 https://www.creativosonline.org/?p=52385
Ny hazo dia singa nipoitra foana tamin'ny natiora, ny voajanahary, ny ambanivohitra ... Nampiasainay ho fanaka, na ho an'ny seramika aza, hamadika singa iray ho lasa iray hafa noho ny haitao vaovao. Saingy amin'ny famolavolana ihany koa dia afaka mampiasa sy mahatratra ny firafitry ny hazo isika, fomba hafakely mamorona sety izay misy ifandraisany betsaka amin'ny tontolo voajanahary nefa tsy misy zavatra tena izy amin'ny azy manokana.
fa, Inona no tokony ho fantatrao momba ny firafitry ny hazo? Ary aiza no azonao ampiasana azy? Izay no horesahintsika anio.
Avy aiza ny hazo
Fantatry ny rehetra fa avy amin'ny hazo ny tena hazo. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fanomezana akora tsotra hanamboarana fanaka sy singa hafa ihany koa ireo, fa toeram-ponenana ho an'ny biby sy zavamaniry maro koa, hanomezana sakafo, hamokarana fanafody, sns.
Eto amin'izao tontolo izao dia misy maro karazana hazo, ny sasany amin'izy ireo dia miankina amin'ny hazo niavian'izy ireo; ny hafa mifanaraka amin'ny lokony, ny vokany hita maso, ny toerana misy ny hazo ...
Ary, mazava ho azy, ao amin'ny endrika ihany koa ny firafitra hazo afaka maka tahaka an'ireo loko sy lamina mampiavaka an'ity fitaovana ity izy. Ho fanampin'izay, tsotra be ny manao azy ary iray amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'ny tetikasa samihafa. Te hahafantatra bebe kokoa ve ianao?
Mifantoka mivantana amin'ny firafitry ny hazo, tsy maintsy milaza aminao izahay fa tsy zavatra nipoitra tato ho ato. Ny mifanohitra amin'izay no izy; Nampiasaina tamina tranonkala hatramin'ny ela izy io ary fomba iray hanasongadinana ireo singa manan-danja na hanome lalindalina kokoa aza ny zavatra aseho.
Ary izany dia vokatry ny zava-drehetra natolotry ny firafitry ny hazo. Amin'ity tranga ity, ny onja na tsipika azo foronina amin'ny hazo, izay raha tsy fantatrao, amin'ny hazo tena izy dia tsy misy roa mitovy; ary koa ny loko sy ny fampifangaroana azy amin'ny alokaloka hafa.
Inona no hampiasana ny firafitry ny hazo
Alao an-tsaina hoe manana tetikasa eo alohanao ianao ary mipoitra ny mety hampiasana ny firafitry ny hazo. Hampiasa azy io ve ianao? Raha mbola tsy nanao an'io ianao taloha, na tsy fantatrao ny fampiasana rehetra azonao omena azy, ny zavatra azo inoana indrindra dia ny tsy hitahitanao azy akory. Fa, Ahoana raha ampahafantarinay anao ny antony mahatonga an'ity firafitra ity hanatsara ny volanao sasany?
Hanome toetra lehibe kokoa ho an'ny orinasa izany
Ny zava-drehetra mifandraika amin'ny natiora, na zavamaniry na hazo, dia miteraka tontolo milamina sy milamina sns. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe tsy maintsy manao tranokala ho an'ny orinasa yoga ianao. Ny firafitry ny hazo dia afaka manome fiadanam-po anaty, fialan-tsasatra ao amin'ilay pejy ... izay hahatonga ny mpampiasa hijanona lava ao amin'ilay pejy, hifangaro miaraka aminy ary hahatsapa ho tena tsara mizaha ny volavolanao ka manentana azy ireo hifandray amin'ilay orinasa.
Ary io no mahatratra an'ity firafitra ity, fomba iray omeo ny mombamomba ny marika sy miaraka amin'ny toetra misy zavatra mifandraika amin'izany.
Hampiasa singa misy ifandraisany amin'ny orinasa ara-batana ianao
Indrindra raha SME izy ireo na manana tranokala hahitan'ny olona azy ireo ary manendry fotoana hanolorana tolotra ho azy ireo (magazay an-dakozia, mpitsabo aretin-tsaina, yoga, fitsaboana miala sasatra ...).
Aiza no hampiasana ny firafitry ny hazo
Na eo aza ny zavatra rehetra nolazainay anao teo aloha, ny endrika iray izay hazo dia mety hiafara amin'ny mandreraka, na misy vokany mifanohitra amin'izany, dia ny handao ilay pejy faran'izay haingana (toy ny hoe manarona efitrano vita amin'ny hazo sy fahatsapana tanteraka ianao sempotra tsy ho ao aminy).
Raha hampiasa ny firafitry ny hazo amin'ny endriny ianao dia zava-dehibe izany safidio ireo araka ny votoatin'ny orinasa na ny mpanjifa, indrindra amin'ny resaka loko, fahamendrehana, tsipika sns.
Tokony ho hitanao amin'ny faritra mety koa izany. Mamporisika anao izahay hametraka azy ireo eo afovoany lehibe, na any aoriany ho an'ny fizarana lehibe: sidebar, slider, footer, sns.
Fomba ahazoana ny firafitry ny hazo
Ankehitriny rehefa fantatrao bebe kokoa momba ny firafitry ny hazo ianao dia tonga ny fotoana hirosoana amin'ny asa aman-draharaha ary hilazana aminao ny fomba hanaovana izany amin'ny solosaina. Raha ny marina dia manana fomba maro hahazoana izany ianao.
Maka sary ny hazo mihitsy
Raha azonao atao ny mandeha any amin'ny fivarotana hazo, na manana fanaka vita amin'ny hazo ao an-trano ianao, ny iray amin'ireo fomba voalohany hahatratrarana ny firafitry ny hazo dia, tsy isalasalana, alaivo sary izany.
Mazava ho azy, miezaha manao maromaro, ary manazava hatrany hatrany. Amin'izany fomba izany, raha ny amin'ny famindrana azy amin'ny solosaina dia ho hitanao hoe iza no tena mahomby amin'ny famolavolana eo am-pelatananao.
Mitadiava volon-kazo amin'ny banky sary
Safidy iray hafa ny fampiasana ny banky sary hahitana sary miaraka amina endrika hazo. Tsotra ihany izy io ary tsy hahita sary karama fotsiny ianao fa hanana azy ireo maimaim-poana sy tsara kalitao ihany koa. Zava-dehibe izany satria raha tsy izany dia hiseho pixelated na manjavozavo loatra izy io, mamorona fahatsapana ratsy.
Mamorona firafitra hazo
Ny safidy farany azonao dia ny mamorona endrika vita amin'ny hazo ny tenanao. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny programa fanovana sary, na Illustrator, Photoshop, GIMP ...
Ohatra, Amin'ny tranga Illustrator, ny fomba famoronana azy dia toy izao manaraka izao:
Atombohy amin'ny fanaovana sary zoro mahitsizoro lava (tsy dia lehibe). Ny zavatra tsara indrindra dia ny fanaovanao azy amin'ny loko hazo tianao apetraka eo amboniny, eo amin'ny aloky ny volontany izay tadiavinao.
Ankehitriny, mandehana any amin'ny Effects / Gallery Effects. Eto amin'ny Sketch, mankanesa any amin'ny Graphic Pen. Amin'izany fomba izany dia hitovy amin'ny tsipika izy ary tena mitovy amin'ny volon-kazo. Azonao atao ny manova ny halavan'ny tsipika mihantona; na ny sakan'ny tsipika. Farany, tsy maintsy apetrakao ny làlan'ny tsipika (mitsangana, diagonal, marindrano ...). Hit ok.
Ankehitriny, hanohitra, tsy maintsy manitatra endrika ivelany ianao. Avy eo mankany amin'ny Window / Image Trace ary hampihetsika ny fikandrana. Mila mandeha any amin'ny "mainty sy fotsy" ianao ary afaka manova, mandroso, miaraka amin'ireto soatoavina manaraka ireto:
Fandaminana lalana: 1-2px
Faritra ambany indrindra: 1-2px
Zoro zorony: 1-2
Aza miraharaha fotsy.
Miverina amin'ny Object / manitatra ary hiova ho loko manga. Ankehitriny dia tsy maintsy apetaho amin'ny sosona hafa ianao mba hahafahanao manova ny loko.
Tsy mila manova an'io loko io amin'ny loko hazo izay mifanaraka ianao. Raha ny fitsipika dia vokatra tsara izany, saingy azonao atao ny manindry ny bokotra blur hanovana kely ireo tsipika ary hanome azy endrika voajanahary kokoa.
]]> https://www.creativosonline.org/textura-madera.html/feed 0 Inona no atao hoe favicon https://www.creativosonline.org/que-es-un-favicon.html https://www.creativosonline.org/que-es-un-favicon.html#respond Mon, 03 Mey 2021 07:51:44 +0000 https://www.creativosonline.org/?p=52382
Azo antoka fa, imbetsaka tamin'ny fotoana iray dia nahare favicon ianao. Izy io dia mifandray akaiky amin'ny famolavolana tranonkala, ary teboka iray manandanja fa isaky ny pejy, na fivarotana an-tserasera, bilaogy, tranokala sns. hanontany anao izy ireo. Fa, Inona no atao hoe favicon? Fa inona izany? Ary ny tena zava-dehibe indrindra, ahoana ny fomba anaovana azy?
Raha manana fisalasalana betsaka momba an'io ianao dia eto izahay hanome anao ny lakileny hahafantaranao azy ary, ambonin'izany rehetra izany, mba hahafahanao manolotra azy ao anatin'ny tetikasanao ary mamela famelabelarana tsara kokoa. Manome toky anao izahay!
Inona no atao hoe favicon
Hanomboka amin'ny fanazavana ny atao hoe favicon izahay mba hahafantaranareo azy. Ary, ho an'ity, tsy misy tsara noho ny manome anao ohatra azo ampiharina. Alao an-tsaina hoe mijery ianao izao (raha ny marina, mamaky anay ianao). Saingy tsy manana takelaka iray fotsiny ianao, fa maro amin'izy ireo. Mety nahatsikaritra ianao fa, ao amin'izy ireo tsirairay avy, ny anaran'ny tarehin'io pejy io hita, na YouTube (satria mihaino mozika ambadika ianao), Gmail (satria misokatra ny mailanao) na ity pejy ity.
Eo akaikin'ny anarana tsirairay, eo ankavia, misy sary kely miseho, amin'ny kianja iray. Ilay iray ao amin'ny Youtube sy Gmail dia azo antoka fa ho fantatra miaraka amin'ireo logo ananany, fa ahoana kosa ny sisa amin'ireo takelaka?
Eny, ilay hitanao dia ilay tena favicon. Raha atao teny hafa, dia a kisary izay mifandraika amin'ny pejy tsidihinao, Izay no antony maha-zava-dehibe ny fijerena an'io antsipirihany io, satria rehefa manampy pejy iray amin'ireo tianao na hitsin-dàlana ianao dia lasa "sary" an'io pejy io ny favicon ary izany no antony hikarakaranao ny endriny mba dia mifamatotra tanteraka (ary ambonin'izany rehetra dia tsara ny manavaka azy amin'ny hafa).
Ity kisary kely ity mazàna dia manana habe napetraka 16 × 16 teboka (na dia azo apetraka amin'ny 32x32px aza). Ao anatin'izany dia mila mitandrina ianao fa izay rehetra apetrakao dia mety tsara, raha tsy izany dia hiseho ho toy ny tasy kely azo fantarina izy io (ary izany dia hanome endrika ratsy be an'ny pejinao).
Fa maninona no tena zava-dehibe ny favicon?
Ankehitriny rehefa fantatrao hoe inona ilay favicon, ary efa hitanao ao amin'ireo pejy sokafanao matetika, dia voamarikao ve fa ankehitriny dia vitsy kokoa ireo pejy tsy eo? Izany dia satria tena zava-dehibe tokoa ny manome fahitana ny hakantony sy ny fahalalana-fomba. Izany hoe, hampita marika na orinasa orinasa ianao izay miahy ny antsipiriany.
Na izany aza, manana ny fampiasana hafa koa ny favicon toy ny:
Manompo toy ny famantarana ny pejinao. Matetika ity favicon ity dia mifandraika amin'ny sary famantarana anananao ao amin'ny tranonkalanao, amin'ny habe kely kokoa ihany. Fa rehefa lehibe loatra ilay sary famantarana ka tsy ho hita eo amin'ny bokotra kely dia mirona hisafidy zavatra mifandraika amin'izany ianao.
Hanampy ireo mpampiasa namonjy ny pejinao hahafantatra izany amin'ny maso ianao. Araka izany, na dia tsy tadidiny aza ny url, na ny anaran'ny orinasa, noho ny sarin'ny favicon dia ho hitany izany.
Ho "tsara" amin'ny SEO. Tsy maintsy alaina amin'ny sira ity. Ary ny hoe manana na tsy manana favicon dia tsy hisy fiantraikany mivantana amin'ny SEO (izany hoe tsy hametraka anao tsaratsara kokoa na ratsy kokoa noho ny fanananao na tsia). Ankehitriny, matetika kokoa no mateti-pitranga fa, rehefa miditra pejy iray ny browser dia mitady an'io favicon io ary, rehefa tsy hitany dia manome lesoka 404. Ary fantatrao fa ireo lesoka ireo dia tsy tsara amin'ny SEO pejy iray.
Ahoana ny fomba hanaovana favicon
Rehefa avy nahita dia mazava fa ny favicon dia singa iray tena ilaina rehefa manana pejy web. Ankehitriny, ahoana no anaovanao azy?
Tokony ho fantatrao fa, amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny zavatra ataony dia safidio ny sary famantarana an'io tranonkala io, na raha lehibe loatra io, zavatra iray manondro azy. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe manana tranokalan'ny fahitalavitra ianao izay nantsoinao tamin'ny fomba sasany. Fa izany, ao amin'ny favicon, lehibe loatra. Fa kosa, azonao atao ny mametraka sarin'ny fahita lavitra mba hampifandraisin'izy ireo izany. Amin'ireny tranga ireny dia asaina mitafy loko mitovy amin'ny tranokalanao izy ireo mba hahafantaran'izy ireo azy tsara kokoa.
Ary ankehitriny, ahoana no ahafahantsika mamorona favicon? Manana safidy maromaro ianao:
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miresaka fandaharana fanovana sary izahay satria ny favicon dia noforonina mitovy amin'ny sary. Mazava ho azy, tsy maintsy tahirinao amin'ny endrika .ico izy io mba hoekena ho toy izany satria tsy avela ho jpg, gif na mitovy aminy.
Ity fomba fanaovana azy ity mamela anao hanamboatra ny favicon tsara kokoa, mitantana ny famoronana azy avy hatrany am-boalohany ary omena azy ny farany tianao. Raha ny mahazatra dia miasa ianao amin'ny sary amin'ny habe mahazatra ary avy eo ampifanaraho amin'ny haben'io bokotra io.
Rehefa dinihina tokoa, dia tokony ampakarina sy hosedraina amin'ny mpikaroka isan-karazany izy hahitana raha toa tsara izany, solontena ary, ambonin'izany rehetra izany, dia takatra.
Mampiasa fitaovana an-tserasera
Amin'ity tranga ity dia manondro ireo pejin-tranonkala izahay izay mikarakara ny fanovana ny sary rehetra tadiavinao ho lasa favicon afaka segondra vitsy. Fa manana ny safidinao koa ianao amboary mivantana ireo pejy ireo ny favicon-nao.
Raha tadiavinao ilay teo aloha (ampidino ny sary dia avadiho izany), dia amporisihinay Favicon Generator na Favic-o-matic. Fa raha ny farany no tadiavinao (amboary avy hatrany izy), miaraha miloka amin'ny favicon.io na mpanonta-x-icon.
Miaraka amin'ny WordPress
Vita amin'ny WordPress ve ny pejinao? Ary fantatrao ve fa afaka mampiasa an'io rafitra io ianao hamoronana ny favicon. Ho an'ity dia azonao atao ny mampiasa plugins vitsivitsy ahafahanao mamorona an'ity bokotra ity amin'ny sary iray izay nampakarinao (na izay ampakarinao). Mandritra ny "Fisehoana / ampanjifaina" azonao atao.
Raha vantany vao vita ny favicon dia mila apetrakao ao amin'ny tranonkalanao fotsiny izany ary avelao izy hahafantatra azy raha afaka mampiseho azy amin'ny faritra havia amin'ny anaran'ny pejinao, ary koa rehefa mitahiry azy amin'ny tianao indrindra. Amin'izany no hahafantaran'izy ireo anao mora foana nefa tsy hijanona hamaky raha ilay pejy no tena tian'izy ireo hotsidihina.
]]> https://www.creativosonline.org/que-es-un-favicon.html/feed 0 Aiza no misintona endritsoratra maimaim-poana https://www.creativosonline.org/donde-descargar-fuentes-gratis.html https://www.creativosonline.org/donde-descargar-fuentes-gratis.html#respond Sun, 02 Mey 2021 07:44:58 +0000 https://www.creativosonline.org/?p=52391
Mazava ho azy fa mihoatra ny indray mandeha ianao dia nahita pejy web, doka, sora-baventy na lahatsoratra tsotra izay nahasarika ny sainao, tsy noho ny zavatra napetrany fotsiny, fa noho ilay endritsoratra nampiasaina. Na inona no mitovy, ny loharanom-baovao ampiasaina. Raha tsy dia fantatrao loatra ny fomba ahafahanao misintona endritsoratra maimaim-poana, mihoatra ireo izay efa voafaritra mialoha amin'ny solosainao, dia mahaliana anao izany.
Ary ny fananana fanangonana endritsoratra tsara dia afaka manampy anao amin'ny famoronana endrika. Fa aza mieritreritra fa ny maimaim-poana rehetra; Mazava ho azy fa hisy tranonkala handefasana endritsoratra maimaim-poana, ary ny hafa izay tsy maintsy aloa. Ary koa ny endritsoratra izay azonao ampiasaina tsy misy olana amin'ny sehatra manokana sy ara-barotra; ary ny hafa izay azonao ampiasaina amin'ny sehatra manokana ihany. Hiresaka momba azy ireo ve isika?
Inona ny loharano?
Ny endri-tsoratra dia manondro ireo litera izay ampiasaina hamoronana endrika. Na banner, logo, mailaka, na boky mihitsy aza. Raha ny tena izy, izay vakianao ankehitriny dia mifanaraka amin'ny endri-tsoratra.
Afaka mihaona amin'ny mavesatra (toy ireo izay tonga amin'ny solosaina na izay soratanao amin'ny Word na programa mitovy amin'izany); sy loharanon-karama, izay tokony handoavanao vola hisintomana ilay rakitra mamela anao hampiasa io loharano io.
Ny ankamaroany dia mitady amin'ny Internet ny fomba fampidinana endritsoratra maimaim-poana. Saingy misy teboka manan-danja iray izay tsy raisina ary mety hitarika anao amin'ny olana.
Misintona endritsoratra maimaim-poana: azo ampiasaina?
Alao an-tsaina ny toe-javatra roa:
Amin'ny lafiny iray, te-hamorona collage misy sarin'ny zanakao ianao ary mila font mety aminao hanomezana dynamism bebe kokoa azy manontolo. Hitanao ny loharano ary alainao hampiasa azy io.
Etsy ankilany, manao an'io collage io ho an'ny orinasa iray ianao ary misintona ny endritsoratra mety ary mampiasa azy hanoloranao ny volavola.
Priori, tranga roa ireo mety hitranga. Saingy misy fahasamihafana kely eo amin'ny iray sy ny iray hafa. raha ny voalohany dia fampiasana manokana sy manokana; ny faharoa dia varotra, aiza ianao no mivarotra ny asanao ary noho izany ny fampiasana an'io loharano io. Ary azo atao ve? Miankina.
Rehefa misintona endritsoratra maimaim-poana dia tsy maintsy tadidinao ny fampiasana izay homenao azy. Ary izany dia, amin'ny pejy pejy fisintomana, mampandre anao izy ireo raha toa ka azo ampiasaina amin'ny sehatra ara-barotra na manokana ny endri-tsoratra.
Inona avy ireo karazana fampiasana azoko omena azy?
Fampiasana manokana. Amin'ity tranga ity, avelany hampiasa ny endri-tsoratra fotsiny ho an'ny toetranao manokana ianao, izany hoe ho an'ny endrika noforoninao ary izay tsy hampiasanao vola na aza amidy amin'ny hafa.
Fampiasana ara-barotra. Azonao atao ny mampiasa ny endri-tsoratra hamoronana endrika anao manokana ary hivarotra ilay set. Amin'ity tranga ity, ny endritsoratra dia tsy maintsy mamaritra fa afaka 100% izany na ekena ny fampiasana ara-barotra.
Inona no hitranga raha maka endritsoratra manokana aho ary ampiasaiko hampiasaina amin'ny varotra? Ara-moraly dia manao zavatra tsy tokony hatao ianao. Nefa koa, raha mahatsapa an'io ny mpanoratra, dia afaka milaza mora foana aminao izy ary manery anao handoa onitra azy noho ny fampiasanao ny loharano niavian'izy io rehefa voalaza fa tsy azo ampiasaina ara-barotra izany.
Noho izany, ny tolo-kevitray dia ny hoe, isaky ny afaka manao izany ianao dia manana loharano 100% maimaimpoana fotsiny mba tsy hifanjevoana eo amin'ireo ho an'ny fampiasan-tena manokana sy ara-barotra.
Aiza no misintona endritsoratra maimaim-poana?
Farany, avelanay ianao eto ambany ny sasany amin'ireo pejy ahafahanao misintona endritsoratra maimaim-poana. Ao amin'izy ireo dia manana endritsoratra endritsoratra betsaka ianao, na dia tsy maintsy mitandrina tsara amin'ny fampiasana omenao azy ianao.
Ary izany tokoa amin'ireto pejy ireto dia ahitanao karazana endritsoratra isan-karazany, avy amin'ireo izay afaka 100% ho an'ny hafa izay tsy azonao ampiasaina afa-tsy amin'ny sehatry ny tena manokana, fa tsy amin'ny varotra. Izany hoe tsy azonao atao ny mampiasa azy ireo hamoahana boky, afisy, amin'ny pejin-tranonkala ...
Ary koa, maro hafa no mila alalana avy amin'ny olona namorona azy ireo.
Amin'ity mazava ity, ireto pejy izay atolotray ireto dia ireto manaraka ireto:
Eto amin'ity pejy ity ianao dia hahita endritsoratra maimaim-poana izay azo vakiana sy tsotra. Tsy manana endritsoratra "original" na "mamorona", na karazana script izy ireo, fa ny sasany amin'ireny dia mendrika ny hotazonina, indrindra ho an'ny lahatsoratra na lohateny.
Dafont dia iray amin'ireo pejy lehibe indrindra hahitana ilay taratasy notadiavinao, na dia tsy noheverinao ho nisy aza. Ary izy io dia manana karazana endritsoratra mihoatra ny 8000, ary ny ankamaroany dia malalaka ho an'ny fampiasana rehetra.
Aiza no misintona endritsoratra maimaim-poana: Fandraisana maimaim-poana 1001
Miaraka amin'ilay iray teo aloha, ny 1001 Free Fonts dia iray amin'ireo pejin-tranonkala malaza indrindra ho an'ny mpamorona sy ny manam-pahaizana amin'ny «litera» satria hitanao ny zava-drehetra ao anatiny.
Marina fa ny endritsoratra sasany dia zaraina amin'ny pejy hafa, fa afaka mahita endri-tsoratra tsy manam-paharoa tianao ihany koa ianao.
Behance dia iray amin'ireo toerana tokony ho fantatry ny mpamorona sary rehetra. Ary ataony izany satria eo no fihaonan'ireo mpamolavola amin'ny Internet. Saingy, ankoatry ny ahafahanao mampiseho ny asanao manodidina, dia betsaka ihany koa ireo manantona ny endrik'izy ireo, satria izy ireo no namolavola azy; bebe kokoa, avelany ianao hisintona azy ireo ary ny ankamaroany dia mahazo alalana amin'ny fampiasana ara-barotra.
Fa maninona no omena anao izany? Eny, satria indraindray ireo endritsoratra ireo dia tsy hita na aiza na aiza ary azonao atao am-boalohany kokoa ny endriny amin'ny alàlan'ny fampiasana zavaboary izay tsy mbola hitan'ny olon-kafa.
Aiza no misintona endritsoratra maimaim-poana: Font River
Ao amin'ny reniranon'i Font no ahitanao a katalaogara zarain'ny lohahevitra. Amin'izany fomba izany, ny endritsoratra izay ho hitanao dia hiorina amin'ny sora-tanana, nofinofy, teknolojia ... Mila mitandrina ianao satria na dia manana endritsoratra maimaim-poana aza izy io, dia misy ihany koa ireo izay aloa (ary ny hafa tsy mamela ianao hampiasa azy ireo amin'ny tanjona ara-barotra).
Mampahatsiahy anao an'i Dafont be io azo antoka io, ary toa klone izany fa tsia. Hanana lahatahiry hahafahanao mikaroka ao amin'ireo endritsoratra maro ao aminy ary mahita ilay tianao indrindra. Saingy, araka ny lazainay aminao, jereo fa manana ny fahazoan-dàlana ilainao izy ireo, indrindra raha toa ka natao ho an'ny tetikasa ara-barotra izy ireo.
]]> https://www.creativosonline.org/donde-descargar-fuentes-gratis.html/feed 0 Ahoana ny fanaovana sary 3D litera https://www.creativosonline.org/letras-3d.html https://www.creativosonline.org/letras-3d.html#respond Fri, 01 Mey 2021 09:51:32 +0000 https://www.creativosonline.org/?p=52312
]]> https://www.creativosonline.org/letras-3d.html/feed 0 Ahoana ny fomba hanaovana gifs animated https://www.creativosonline.org/gifs-animados.html https://www.creativosonline.org/gifs-animados.html#respond Fri, 30 Apr 2021 09:34:49 AM +0000 https://www.creativosonline.org/?p=52313
Androany ny gifs dia ampiasaina hanehoana fihetsem-po na fahatsapana vokarin'ny hafatra novakintsika. Ireo dia nahatonga ny lavaka isan'andro, amin'ny fomba hafa, fa tsy mampiasa teny, ny zavatra ataontsika dia maka sary an-tsaina mba hamaly ny zavatra novakiantsika (fanontaniana iray, vazivazy, andian-teny sns.). Fa ahoana ny fomba hanaovana gifs animated?
Taloha dia sarotra ny fanaovana azy ireo, ary tsy ny rehetra no nahay nanao azy. Ny iray amin'ireo programa tsara indrindra any dia ny Photoshop, saingy ny fampiarahana ny filaharana dia mitaky minitra maromaro na ora fiasana mihitsy aza hahamety azy. Androany dia niova izany ary misy fomba maro hanatanterahana azy ireo. Te hahafantatra ny fomba hanaovana gifs animated ianao?
Inona no atao gifs mihetsika
Animated gifs dia gif, izany hoe fanitarana sary izay, tsy mitovy amin'ity iray ity, manana fihetsiketsehana izy ireo amin'ny alàlan'ny fampidirana ny filaharan'ny sary na horonan-tsary mamorona sary mihetsika.
Ireo dia nampiasaina be tamin'ny bokotra sy sora-baventy, fa androany dia niova ho singa fifandraisana na amin'ny tambajotra sosialy na amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra (toy ny WhatsApp, Telegram, Signal ...).
Ny gif animated dia azo atao amin'ny fomba roa samy hafa:
Miaraka amin'ny Sary.
Miaraka amin'ny filaharana na clip video.
Fa maninona no tena zava-dehibe ny GIF mihetsika
Izao dia izao, gifs animated dia endrika fiteny be mpampiasa sy lamaody. Raha tokony hanoratra zavatra iray izahay dia mampiasa ireo filaharana mihetsika ireo, na ny sary, ny horonan-tsary, ny lahatsoratra ... hanehoana izay nampahatsiahy anay ny hafatra iray.
Talohan'izay, ny fampiasana an'ireny dia an-jorony, saingy tamin'ny fiakaran'ny tambajotra sosialy dia nanomboka nandray andraikitra lehibe kokoa izy ireo. Mandritra izany fotoana izany dia nanomboka nampiasa azy ireo ihany koa ireo mpampita hafatra, izay nanatsara ny fampiasan'izy ireo.
Amin'izao fotoana izao, gifs, miaraka amin'ny meme, no be mpampiasa indrindra ary maro amin'izy ireo no lasa malaza. Tonga fomba iray hifandraisana izy ireo ary izany no antony mahatonga azy ireo ho mora kokoa kokoa ny manao azy ireo. Fa ahoana ny fomba hanaovana gifs animated?
Animated gifs amin'izao fotoana izao dia tena mora atao, satria misy programa sy rindranasa marobe izay manampy amin'ny fananganana iray. Raha ny marina dia azonao atao izany amin'ny fikororohana na amin'ny alàlan'ny preset (tsara indrindra ho an'ny vao manomboka).
Ireto misy programa atolotray ireto:
Izy io dia iray amin'ireo programa ampiasaina indrindra hananganana gif animated noho ny fahatsorany sy ny fampiasana azy mora foana. Afaka miaraka amin'izy ireo ianao mamorona gif maimaim-poana ary manao izany amin'ny alàlan'ny sary, fa azonao atao koa ny mampiasa azy amin'ny horonan-tsary izay raisiny avy amin'ny Youtube na Vimeo.
Mazava ho azy, tena fototr'izany izy io, izay midika fa tsy ho afaka mampiditra horonantsary marobe amin'ny sary mihetsika iray mitovy ianao. Raha ny sary, eny azonao atao.
Animation gifs: Gfycat
Raha manana fotoana kely ianao ary mila gif dia mamela anao hamorona iray ao anatin'ny iray minitra ity tranonkala ity. Ahoana? Eny, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mampakatra horonantsary na sary (na maromaro) ka izy no tompon'andraikitra amin'ny famoronana sary mihetsika.
Mamela anao hampiasa video avy amin'ny Youtube, Vimeo, manampy lahatsoratra amin'ny sary na horonan-tsary, tapaho izay ilainao ...
PicsArt ho an'ny GIF
Fampiharana io amin'ny iOS ihany no misy (ho an'i Apple). Amin'ity tranga ity dia ho vitanao ny mamorona azy amin'ny fikororohana, amin'ny fampiasana horonan-tsary na sary. Fa ny zavatra tsara dia azonao atao ny maka ny zava-drehetra ao amin'ny galerianao, izany hoe azonao atao ny manamboatra azy ireo amin'ny sarinao, horonan-tsary, sns.
Izy io dia iray amin'ireo programa tsara indrindra ahafahana manao gif animated. Mba hanaovana izany dia manolo-kevitra anao izahay hifehezana tsara ny fandaharam-potoana mba hahazoana vokatra tsara.
Mazava ho azy, mamporisika anao izahay, raha vao sambany dia mampiasa tutorial ianao satria hanampy anao betsaka hahafantatra hoe inona ireo dingana tokony hataonao.
Animation gifs: GIMP
Toy ny Photoshop, miaraka amin'ny GIMP dia ho afaka hanao gifs mihetsika koa ianao. Izy io dia programa maimaim-poana, noho izany dia tsy mila mandoa na inona na inona ianao. Araka ny efa nolazainay anao teo, eto ihany koa ny zavatra tsara indrindra dia ny tamin'ny fotoana voalohany mampiasa fampianarana mba hahalalanao ny dingana.
Matetika izy ireo no miantso azy hoe "mpanjakan'ny tranokala GIF." Ary izany ve Tsy mila misintona na inona na inona ianao, tranokala iray ahafahana manavotra gif maro anisa ary afaka mamorona azy ireo mora foana ianao.
Ankoatr'izay, tsy amin'ny sary ihany izy io, fa afaka mamadika ny horonan-tsary ho GIF. Mazava ho azy, 15 segondra fotsiny ny ambony indrindra azo avela.
Ity fampiharana ity dia iray amin'ireo tsara indrindra hanaovana gifs mihetsika. Mazava ho azy, sary ihany. Mba hanaovana izany dia mila misafidy fotsiny ireo sary tadiavinao ianao, ny haben'ny gif ary ny faharetanao ilainao. Afaka segondra segondra dia hamorona izany izy ary hanome url anao hizara azy, hampakatra azy ao amin'ny bilaoginao na hampidina azy.
Izy io dia miasa mitovy amin'ny teo aloha ihany, satria azonao atao mamorona gif, na amin'ny sary na amin'ny url ny horonan-tsary hatramin'ny 10 segondra farafaharatsiny. Fa ny tena misongadina, ary ny antony anoloranay izany, dia ny fahafahanao mampiasa ny modely vokany ary koa ny fiasa Reverse, hahazoana vokatra tsy manam-paharoa.
Ireo fampiharana hafa dia tsia.
Ity rindrambaiko finday ity dia manana tombony mihoatra ny hafa, ary izany dia azonao ampiasaina sivana hipster hametahana azy io ary hamorona valiny iray tany am-boalohany. Mazava ho azy, tsy maintsy tadidinao fa 2,5 segondra fotsiny no ahafahanao manao azy ireo. Ny zavatra tsara dia mamela anao mampihatra sivana dimy ianao.
Animator Pixel: Mpamorona Gif
Ity fampiharana ity dia ahafahanao mamorona sary mihetsika fa, tsy tahaka ireo teo aloha, fa pixel amin'ny pixel no ampiasainy. Hanana zana-kazo 15 farafahakeliny ianao amin'ny fampiharana maimaim-poana (tsy voafetra ny karama).
Ahoana raha tsy te-hamorona gif aho?
Mety ho tsy tianao ny mamorona GIF, fa tadiavo ilay tianao indrindra na farito ny fomba fanehoanao ny hevitrao. Raha izany dia misy pejy toa an'i Reddit, GIF Reaction… izay ahitanao azy. Na dia amin'ny alàlan'ny rindrambaiko fandefasan-kafatra aza dia manome alalana anao hiditra amin'ireo gif animated samihafa efa vita mialoha na vonona ny hisintona ianao mba tsy hanahirana anao mianatra ny fomba hanaovana gif animated.
Manana safidy maro hisafidianana ianao.
]]> https://www.creativosonline.org/gifs-animados.html/feed 0 Photoshop Effects https://www.creativosonline.org/efectos-photoshop.html https://www.creativosonline.org/efectos-photoshop.html#respond Thu, 29 Apr 2021 09:34:48 PM +0000 https://www.creativosonline.org/?p=52314
Ny programa Photoshop dia iray amin'ireo fampiasan'ny matihanina indrindra, fa maro ihany koa izay entanina amina endrika famoronana. Amin'ny Internet dia azonao atao mahita vokatra Photoshop taonina izay ahafahanao manodinkodina ny sarinao ary tsy mampino ny valiny.
Ary maninona no ampiasaina azy ireo? Alao an-tsaina hoe tsy maintsy manao ny fonon'ny bokinao ianao. Ity dia mila manisy fiatraikany ianao ary noho izany dia naka sary tonga lafatra ianao. Fa apetraka toy izany, tsy misy resaka intsony, tsy milaza na inona na inona izy. Etsy ankilany, amin'ny fampiharana ny vokatra Photoshop, azonao atao ny manao azy ho hafa, na dia nataon'ny tena manam-pahaizana aza. Firy izao? Ary ahoana no anaovana azy ireo?
Photoshop effects, ahoana ny fomba anaovana azy ireo?
Raha apetrakao ao amin'ny motera fikarohana ny vokatra Photoshop, tsy isalasalana fa hahazo valiny an-tapitrisany ianao. Fa ny zavatra iray mazava dia hahazo maro ianao fampianarana mba hahafahana manao amin'ny sarinao tena fika. Ary, miankina amin'ny sary tadiavinao, dia afaka misafidy ny iray na ny vokany hafa ianao.
Raha manontany tena ianao raha tafiditra ao anaty programa ny vokany, toy ny mety hitranga amin'ny vokatry ny Instagram na ny hafa mitovy amin'izany, ny valiny dia tsia. Tsy maintsy ataonao an-tanana izy ireo, ka izay no mahatonga ny maro ho farany tsy mianatra afa-tsy vitsivitsy amin'ireo maro azo tanterahina.
Na izany aza, amin'ny Internet dia afaka mahita maro amin'izy ireo ianao, ary izany no handaozanay anao anio. Eto ianao dia afaka mahita ny sasany amin'ireo effets Photoshop be mpampiasa indrindra, na ireo izay, amin'ny toetrany, dia azo ampiasaina ho an'ny mpanjifanao.
Un "Bokeh" dia sary tsy misy jiro tsy misy ifantohana, fa manome majika mikasika ilay sary izy ireo. Mba hanaovana izany dia mila manao izao manaraka izao ianao:
Manampia sosona ambadika (Layer / layer vaovao). Tokony apetrakao amin'ny bokeh mainty izy io. Eto ianao dia tsy maintsy mandeha amin'ny singa File / place embedded.
Ovay ny fomba fampifangaroana an'io sosona io mba hampitomboana na handefasana ary hampihena kely ny opacity.
Vokatra Photoshop: avadika mainty sy fotsy ny sary
Azo antoka fa amin'izao fotoana izao dia manontany tena ianao hoe maninona no ovay ho loko mainty sy fotsy ny sary miloko. Ary ny marina dia manana valiny tena tsotra izy: hanasongadinana ny sary. Mino izany na tsia, efa zatra loko loatra isika, mahita ny zava-drehetra amin'ny alokaloka samihafa, ka sary mainty sy fotsy no misarika ny saintsika satria "tsy ara-dalàna izany."
Ka amin'ity indray mitoraka ity ity Photoshop effets ity dia iray amin'ireo tsotra indrindra azonao atao, ary raha ny marina dia atolotray izany, ohatra, ho an'ny fonony, afisy na ho an'ny tetikasa izay angatahina aminao hanasongadinana zavatra na olona iray amin'ilay sary.
Ary ahoana no anaovana azy? Mariho:
Vantany vao nosokafanao ny Photoshop sy ny sarinao ao amin'ilay programa, ny dingana voalohany tokony hataonao dia ny manaova ny sosona ambadika. Tena mora ataonao izany satria apetrakao eo amin'ny sosona Background, tsindrio havanana ary tsindrio ny "duplicate layer". Safidy iray hafa, haingana kokoa, ny manome Ctrl + J (saingy tsy maintsy manana ny layer Background voafantina ianao.
Manaraka izany dia mila an'io sosona io ianao mba ho lasa "smart object". Ahoana no anaovanao an'izany? Eny, ao amin'io sosona io ihany, rehefa voafantina izy, dia mila tsindrio havanana ianao ary «Avadiho ho Smart Object».
Ankehitriny, mandehana amin'ny sary / fanitsiana / mainty sy fotsy. Ao amin'ny boaty izay miseho, aza manova na inona na inona, tsindrio fotsiny OK.
Ny zavatra farany, tsy maintsy manova ny fomba fampifangaroana ianao mba hihamaro ary, manana ny fanaraha-maso eo aloha ho mainty ary ny fibaikoana ny fotsy toy ny fotsy, mandehana any amin'ny Layer / New layer layer / Gradient map. Raha vantany vao vita dia ho mainty sy fotsy tanteraka ny sary.
Efitra Photoshop: Orton
Ny vokan'ny Orton hahatonga ny sarinao ho mahery sy majika izany. Hahatratra firindrana miaraka amin'ireo feo sy loko ianao izay hahatonga azy io ho toa tontolo hafa. Noho izany, tsara izany raha tsy maintsy miasa miaraka amin'ny sarin'ny sary, biby ... amin'ny ankapobeny, izay sary tianao hasongadinana ny hakanton'ny iray manontolo.
Ary ahoana no anaovana azy?
Raha vantany vao misokatra ny Photoshop sy ny sarinao dia omeo ny layer Layer / Duplicate.
Ny fomba fampifangaroana an'io sosona io dia tsy maintsy "raster". Avereno indray ilay sosona.
Amin'ity faharoa ity dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Filter / Blur / Gaussian Blur ianao. Eo, hametraha tariby manodidina ny 15 teboka. Omeo izy hanaiky dia ho hitanao ny fanovana. Ovao izao ny fomba fampifangaroana mba hitombo ary hanana ny vokany ianao.
Instagram Gingham Effect
Tadidinao ve ny Vokany Gingham azonao amin'ny Instagram? Fantatrao fa afaka mamerina azy io mora foana ianao amin'ny Photoshop. Mila manaraka ireto dingana ireto fotsiny ianao:
Mandehana any amin'ny Layer / New Adjustment Layer / Exposure. Eto ianao dia mila ny fanitsiana gamma sy ny offset ho avo, satria hanome anao loko mainty io. Tsindrio OK.
Mandehana any amin'ny Layer / New Adjustment Layer / ambaratonga. Amin'ity iray ity dia tsy maintsy averina amin'ny laoniny ny fifanoherana izay efa very tamin'ny teo aloha. Ahoana? Ahisiho miankavanana ny boaty. Tsindrio OK.
Averina indray, sosona / sosona fanitsiana vaovao / Hue / saturation. Mila mampihena ny haavon'ny saturation kely ianao.
Layer / Layer vaovao. Ity dia tokony hosoratana manga manga mainty. Ankehitriny, tsy maintsy ampidininao ny opacity. Farany, ovay ho "jiro malefaka" ny fomba fampifangaroana. Ary voila!
Vokatry ny watercolor
Raha tianao izany mamadika sary amin'ny loko rano, azonao atao koa ny manao azy amin'ny fomba Photoshop. Mba hanaovana izany dia araho ireto dingana ireto:
Voalohany, mila mamorona "canvas" banga ianao. Mba hanaovana izany, dia ampirisihinay handeha amin'ny File / New ianao. Ny fandrefesana dia manandrana mampifanaraka ny sarinao.
Mandehana any amin'ny Gallery / Filter Gallery.
Safidio ny firafitra, ary avy eo Texturize.
Ampiharo ireto masontsivana manaraka ireto:
Jiro: ambany ankavanana.
Ankehitriny tsy maintsy mametraka ny tenanao miaraka amin'ny sarinao ianao. Mba hanaovana izany dia mila tarihinao mankany amin'ny lamba namboarinao ilay sary.
Galerie sivana / sivana. Safidio ny ampahany Artistic ary kitiho ny Diluted Color.
Mila mampihatra ireto masontsivana ireto ianao: Texture, 1; hamafin'ny aloka, 0; tsipiriany borosy, 14. Tsindrio OK
Sary / fanitsiana / Hue / asabotsy. Eto dia tsy maintsy apetrakao eo am-baravarankely ny saturation -75. Tsindrio OK.
Sary / fanitsiana / famirapiratana / mifanohitra. Atsangano hatramin'ny 72 ny famirapiratana. Tsindrio OK.
Ankehitriny, mifantina ny sosona sary, kitiho eo amin'ny zoro ambany ankavanana ary apetaho ao amin'ny Mask.
Safidio ny borosy ary ataovy mainty. Tsikelikely dia hamorona sarontava ianao. Noho izany dia tsy hametraka azy amin'ny loko mainty fotsiny ianao, fa amin'ny loko samihafa.
Vantany vao vita ianao dia mila manambatra ireo sosona fotsiny.
]]> https://www.creativosonline.org/efectos-photoshop.html/feed 0 Teknolojia pointillism https://www.creativosonline.org/tecnica-del-puntillismo.html https://www.creativosonline.org/tecnica-del-puntillismo.html#respond Wed, 28 Apr 2021 09: 19: 28 + 0000 https://www.creativosonline.org/?p=52316
Amin'ny maha-mpamorona anao dia mila manana fampahalalana momba ny teknika maro ianao hahafahana manolotra safidy samihafa amin'ny mpanjifanao. Ny iray amin'izy ireo dia mety ho ny teknika pointillism, tsy dia be mpampiasa, fa miaraka amin'ny valiny lehibe izay, tsy isalasalana, dia afaka mamoaka ny lafiny mamorona sy am-boalohany indrindra sary, sary, sary hosodoko ary, eny, koa video.
fa, Inona ny teknikan'ny pointillism? Ahoana ny fomba fanatanterahana azy? Inona avy ireo toetra mampiavaka azy? Misy mpanoratra izay niavaka noho izany? Amin'ity tranga ity dia holazainay aminao ny momba an'io teknika io sy izay rehetra tokony ho fantatrao momba izany, ankoatran'ny manome anao ohatra amin'ny maso ny valiny azonao.
Inona ny teknika pointillism
Ny zavatra voalohany hijanonantsika dia ny fahazoanao ny tondroin'ny teknikan'ny pointillism. Araka ny lazain'ny anarany dia mifototra amin'ny teboka ity teknika ity. Tena, Fomban'ny sary hosodoko izany, fa tsy ny fikapohana borosy, ny atao dia ny fampiasana teboka misy loko isan-karazany mba hamoronana asa vita amin'io teknika io, miaraka amin'ny teboka.
Raha jerena voalohany, indrindra ny mijery lavitra, dia tsy tsikaritr'izy ireo, dia toy ny hoe nandoko sanganasa, sary, sary amin'ny fomba mahazatra ny mpanoratra. Saingy, rehefa manakaiky azy ianao dia ho hitanao ny fisehoan'ireo teboka mamorona vondrona loko vitsivitsy izay mandrafitra ny sary iray manontolo. Na izany aza, raha jerena akaiky dia toa singa tsy misy dikany izy ireo.
Ny fivoarany dia tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX, ny mpanoratra voalohany nampihatra izany ny frantsay Georges Seurat. Ankehitriny, tsy naharitra ity teknika ity. Na dia nahatratra ny fara tampony aza izy tamin'ny 1890 ary tamin'izany fotoana izany dia samy te hahatratra ny sanganasa ny rehetra amin'ny alàlan'ny teknikan'ny pointillisme, ny marina kosa dia nihena izy io taty aoriana ary tsy dia hita intsony ankehitriny ny asa toa an'io. Mazava ho azy, maro amin'ireo hevitra sy hevitra, ary koa ny mampiavaka azy, no maharitra mandritra ny fotoana ary ampiasaina amin'izao fotoana izao.
Raha heverintsika fa miova be ny lamaody, tsy misy zavatra tsy ampoizina amin'ity teknika ity ka lasa lamaody indray.
Mampiavaka ny pointillism
Mikaroka bebe kokoa amin'ny teknikan'ny pointillisme, tokony ho fantatrao fa manana andian-toetra "manokana" izy, toy ny:
Ny loko dia madio. Raha ny marina dia tsy azo atao ny mifangaro amin'ireo loko ireo, fa kosa mifototra amin'ny famolavolana loko izay mamorona sary iraisana miaraka amina vondrona maromaro. Mbola lavitra lavitra aza izany, ary na dia mihevitra aza ianao fa maro loko isan-karazany no ampiasaina, ny teknika pointillism tany am-boalohany dia mampiasa loko voalohany fotsiny. Na izany aza, mamitaka anao ny maso ary mampifangaro ireo loko ireo mba hisehoany fa nampiasa zavatra maro hafa ny mpanakanto.
Ny teboka dia mamorona lalina. Noho izany, ny mpanoratra sasany dia mamoaka ireo teboka bebe kokoa mba hanomezana boky iray ary miaraka amin'izay koa ny halaliny azo.
Ny loko dia maneho fihetseham-po. Noho izany, rehefa natsangana niaraka tamina loko mafana sy maivana ny tsipika fiakarana, dia voalaza fa misy dikany mahafaly ny asa; ny mifanohitra amin'izay, ny tsipika nidina, ny loko mangatsiaka sy ny maizina dia nanjary nalahelo kokoa.
Ireo velaran-tany ". Na dia azo ampiasaina hanehoana seho maro aza ny teknika pointillism, ny tena fahita amin'izany dia ny sehatry ny sirkus, ny renirano, ny seranan-tsambo ... Na izany aza, afaka mahita asa maro hafa ianao izay tsy nisy ifandraisany, toy ny sary, velaran-tany feno, biby. ..
Mila baiko ry zareo. Ary tsy mora ny fanatanterahana azy io, ary fantatry ny mpanakanto tsirairay miatrika azy fa mila mikasa sy manazava ny tenany izy ireo hahazoana ny valiny tadiaviny, noho izany dia tsy maintsy arahana ny baiko hanome ny dikan'ilay asa.
Inona avy ireo dingana hanaovana ny teknikan'ny pointillism
Raha te hianatra hanao ny teknikan'ny pointillism ianao dia ilaina ny, voalohany indrindra, manana ny fitaovana rehetra ilainao hanatanterahana izany. Manokana, miresaka izahay: loko, pensilihazo, penina ary lamba rongony (azonao soloina amin'ny baoritra na taratasy tsy manify loatra izany).
Ny dingana tokony hataonao hanatanterahana izany dia:
Mieritrereta sary iray tianao hamboarina. Eo am-piandohana dia soso-kevitra fatratra fa, alohan'ny hanombohanao manao azy, dia manaova sary ny sary izay hataonao miaraka amin'ilay teknika satria hanampy anao hamily ny teboka sy ireo vondrona loko rehefa mamorona azy. Ho fanampin'izay, tsy maintsy manapa-kevitra ianao raha hatao amin'ny pensilihazo, penina, borosy sns.
Atombohy ny manondro ny sary, manaraka baiko foana. Raha ny marina dia ampirisihina ianao hifantoka amin'ny faritra manokana ary tsy avelanao izany mandra-pahavitanao azy tanteraka. Ho fanampin'izay, azonao atao ny manao ny silhouette voalohany amin'ny sary ary avy eo manampy ny antsipiriany aminy. Ity raha mbola manana ny lokony mitovy loko.
Fetsy tsara ho fantatra raha toa ka mandeha amin'ny lala-mahitsy ny zavatra ataonao dia ny miala kely amin'ny asanao mba hahitanao azy manontolo. Rehefa akaiky ianao dia teboka daholo ny hitanao fa tsy ny valiny rehetra. Noho izany, raha mijery azy lavitra ianao dia ho hitanao raha mahatratra ny vokatra antenainao ianao na raha misy zavatra azonao ovaina mba hahatratrarana azy.
Talohan'ny nilazantsika an'i Georges Seurat ho mpanakanto voalohany nampiasa ny teknika pointillism. Na izany aza, niresaka ihany koa izahay fa tsy izy irery no nampiasa azy. Betsaka ny maro izay noforonina tamin'ity teknika ity ny sangan'asany, ny sasany mety ho fantatrao kokoa aza.
Anarana toy Vincent Van Gogh, Paul Signac, Yael Rigueira, Vlaho Bukovac, Camille Pissarro, Sns ohatra vitsivitsy monja amin'ireo mpanakanto ireo izay misy ny asan'izy ireo maneho ny kanto amin'ny teknika pointillism.
Hevitra ho an'ny teknika
Ary farany, eto dia afaka nahita hevitra sasantsasany momba ny sary izay nampiasa ny teknikan'ny pointillism ianao mba hahitanao izay hitanao. Ary efa fantatrao fa azonao atao koa ny manatanteraka azy amin'ny famoronana samihafa.
Azonao atao mihitsy aza mitadiava rindranasa na programa afaka mamadika ny sarinao na ny sarinao amin'ny teknika pointillism ary manana valiny tany am-boalohany sy hafa maro noho ny mahazatra.
]]> https://www.creativosonline.org/tecnica-del-puntillismo.html/feed 0 Ahoana ny fomba hanampiana fanehoan-kevitra ao amin'ny CSS https://www.creativosonline.org/comentarios-en-css.html https://www.creativosonline.org/comentarios-en-css.html#respond Talata, 27 Apr 2021 09:19:25 +0000 https://www.creativosonline.org/?p=52315
Raha nanomboka namorona ny tranonkalanao manokana ianao dia mety nanapa-kevitra ny hampiasa modely amin'ny voalohany fa tsy hanomboka hamolavola azy io (na satria tsy dia manana hevitra loatra ianao na satria mila fototra). Amin'ireto modely ireto dia ho hitanao fa indraindray misy hevitra ao amin'ny CSS. Ary tsia, amin'izany anarana izany dia tsy miresaka momba ny hevitra na lahatsoratra apetraky ny mpamaky ao amin'ny tranonkalanao, fa ny fanamarihana kely izay nataon'ny mpanafika ary manampy amin'ny fahafantarana izay tondroin'ny faritra tsirairay amin'ilay kaody lehibe mifehy. (ary inona no mahatonga ny tranokala ho tena izy.
Avy eo, Fantatrao ve ireo hevitra CSS? Fantatrao ve ny fomba fanatanterahana izany? Androany izahay dia manazava ny zava-drehetra mba hahafantaranao momba azy ireo.
Inona avy ireo hevitra?
Amin'ity tranga ity dia tsy hanondro ireo hevitra heverina ho toy izany izahay lahatsoratra manome hevitra momba ny zavatra iray ary mamela ny fifandraisana eo amin'ny mpampiasa sy ny pejin-tranonkala. Manokana, izahay dia miresaka an'ireo izay apetraka eo anelanelan'ny tag HTML sy izay tsy hita maso, fa hita ao amin'ny kaody fandaharana amin'ny tranokala, amin'ny fomba anazahana hampahafantatra amin'ilay olona hoe inona ilay kaody fa raha tsy hita taratra izany amin'ny Internet (toy ny).
Fa inona avy ireo hevitra?
Ny zavatra manaraka mety hanontanianao ny tenanao dia ny antony tokony hametrahanao hevitra ao anaty môdely, na amin'ny antontan-taratasy fandaharana. Ary, minoa na tsia, tena mahomby ireo fanamarihana ireo satria, alao sary an-tsaina izao toe-javatra manaraka izao: nanomboka nandrafitra pejy iray ianao izay handany volana maromaro. Manova be ianao, mandahatra isaky ny pejy, sns. Ary tampoka teo, rehefa mijery ny jery todika ianao dia manontany tena hoe inona no nahatonga ilay kaody izay teo. Na mbola ratsy kokoa aza, tsy maintsy manova loko na endrika ianao ary tsy fantatrao hoe aiza no misy ny kaody napetrakao. Inona no mety ho korontana?
Eny ary, Ireo fanamarihana nataonao ireo, ho toy ny fanamarihana amin'ny fandaharana, dia manampy anao hahatsiaro ny anton'io kaody io na hahafahanao mamantatra ny tenanao ao amin'ilay tetikasa izay an-tananao. Araka izany, na dia mandalo herinandro, volana na taona aza ianao dia ho fantatrao ny fomba nandaozanao ny zava-drehetra sy ny kaody tsirairay noresahinao.
Amin'ny fotoana hafa, ireo fanehoan-kevitra ireo dia ampiasaina mba ahafahana mitsapa lafin-javatra sasany, mba hampavitrika azy ireo na tsia amin'ny tranonkala miankina amin'ny fanomezana azy ireo fahadisoana rehefa mampiasa azy ireo.
Mazava ho azy fa ny fahitana ireo fanehoan-kevitra tsy ho hita maso dia tsy midika hoe manana fahalalahana hanoratra na inona na inona ianao. Ary, indraindray, ny fanehoan-kevitra dia mety tsy ho amin'ny toerana na hahatonga ny mpanjifanao hahatsapa ho sosotra amin'ny zavatra apetrakao ao (izany hoe fanavakavahana tanteraka). Noho izany dia mila mitandrina ianao ary mametraka izay tena ilaina fotsiny. Satria, na dia tsy ho hita aza izy ireo, maro ny mpitsikilo ankehitriny izay mamela anao hijery ny kaody HTML ary, miaraka aminy, ataovy izay hahitana ireo hevitra napetraka.
Ahoana ny fomba hametrahana hevitra CSS
CSS dia iray amin'ireo fiteny fandaharana, angamba iray amin'ireo be mpampiasa indrindra, miaraka amin'ny HTML, amin'ny pejin-tranonkala sy ny famoronana endrika. Noho izany, ny fahalalana azy bebe kokoa dia zava-dehibe. Raha ny marina, ny iray izay hampiasainao indrindra dia CSS3.
Raha efa nanao ny "dingana voalohany" amin'ny programa ianao dia ho fantatrao fa ny kaody dia ampiasaina amin'ny "fitafiana" ny firafitra ary manampy ny CSS hahatonga ny tranonkalanao ho lasa manintona kokoa. Fa ao anatin'izy ireo dia misy ny hevitra ao amin'ny CSS. Ireo dia mitovy amin'ny fiteny famoahana programa rehetra, na dia samy hafa aza ny fanoratana azy ireo.
Ahoana no anaovanao hevitra CSS? Ary noho izany dia mila manao izao manaraka izao ianao:
Sokafy amin'ny tsivalana miolakolaka (Shift + 7) ilay hevitra.
Asio asterisk avy eo.
Ity no fiandohan'ny hevitrao amin'ny fomba rehetra izay zavatra rehetra soratanao hatrizay dia tsy ho hita eo amin'ny Internet amin'ny endrika maso, na dia ao amin'ny kaody HTML amin'ny tranonkala aza izany.
Mba hanidiana ny fanehoan-kevitra dia tsy maintsy asterisk aloha ianao ary avy eo ilay slash miolakolaka.
Amin'izay fotoana izay, ny zavatra soratanao manaraka dia hisy fiatraikany amin'ny maso amin'ny Internet ary ho hita io.
Raha ny fahitana azy dia toy izao ny fanehoan-kevitra:
/ * Ity ny fanehoan-kevitra izay hafenina amin'ny Internet * /
Raha nahavita azy tsara ianao dia azo inoana fa hiseho amin'ny volondavenona izy io fa tsy amin'ny mainty na amin'ny loko hafa satria mitranga amin'ny kaody hafa. Midika izany fa voafaritra tsara izy io ary ho lahatsoratra tsy hiseho amin'ny Internet (ao amin'ny faritra nametrahanao azy).
Karazan-kevitra ao amin'ny CSS azonao apetraka
Na dia miasa miaraka amin'ny HTML aza ianao dia ara-dalàna raha mametraka hevitra maromaro ianao hahafahanao mahafantatra izay ataonao na hampitandrina anao fa misy ampahany tsy misy ataonao na lesoka tokony amboarinao. Na izany aza, aorian'izay dia zava-dehibe ny fanafoanana ireo karazana fanehoan-kevitra izay tena tsy hisy ilana azy intsony. Tsy midika izany fa tokony esorinao daholo izy rehetra.
Misy ny fanehoan-kevitra CSS tokony hipetraka. Iza? Manaraka:
Fanamarihana manazava. Fanehoan-kevitra CSS izy ireo izay manampy manazava zavatra manokana. Ohatra, ny haben'ny sary ao amin'ny faritra manokana mba hahafantaranao izay sary tokony hampiasaina.
Fanamarihana manakana. Izany hoe ireo fanamarihana natao mba hamerana ny fizarana tsirairay na ny ampahany amin'ny tranokala: ny footer, ny header, sns.
CSS kilemaina. Amin'izany dia mila mitandrina ianao satria tsy maintsy alaminao fa kilemaina io fa afaka mandeha tsara raha sanatria ka tianao ny mampiasa azy indray. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe manana tranokala ianao ary miadana be. Avy eo ianao dia manapa-kevitra ny hanajanona ilay slider napetrakao voalohany ary hahita raha manatsara ny tranonkala izany. Raha izany dia azonao atao ny mamerina azy amin'ny fotoana rehetra aorian'ny fandaminana ny olana.
Fanamarihana momba ny trosa. Ary farany, azonao atao ny mamela ireo hevitra izay manondro ilay olona namorona kaody, na ny kinova ao amin'ny tranonkala nataonao, mba hahafahanao mivoatra na manome voninahitra an'ilay olona nahavita ny asa (na dia tsy hita maso amin'ny tranga sasany.
]]> https://www.creativosonline.org/comentarios-en-css.html/feed 0 Ahoana ny fomba hanovana sary JPG ho PNG https://www.creativosonline.org/convertir-una-imagen-jpg-a-png.html https://www.creativosonline.org/convertir-una-imagen-jpg-a-png.html#respond Mon, 26 Apr 2021 18:12:46 +0000 https://www.creativosonline.org/?p=52025
Raha manokan-tena amin'ny sary na asa mifandraika amin'ny sary ianao, dia azo antoka tokoa fa mahafantatra endrika toa ny JPG, PNG, GIF ... Izy ireo no mahazatra indrindra iasanao. Indraindray kosa hitanao fa mila ianao ovay ny sary JPG ho PNG, Hainao ny manao azy?
Eto izahay dia hilaza aminao ny toetran'ny endrika sary tsirairay sy ny fomba fanovana JPG ho PNG amin'ny fomba samihafa, na tianao atao amin'ny programa izany, miaraka amin'ny pejy an-tserasera na avy amin'ny findainao.
Inona ny sary JPG
Ny endrika JPG dia iray amin'ireo fahita indrindra amin'ny indostria niomerika, nefa izy io ihany koa no tena ampiasaintsika, na rehefa misintona sary avy amin'ny Internet isika na mampakatra iray amin'ireo tambajotra sosialy. Amin'ny toerana misy anao dia saika ny programa rehetra dia mitahiry sary amin'ity endrika ity ary rehefa ataonao amin'ny fakantsary finday dia manana ny extension JPG koa izy ireo.
Manokana, JPG, fantatra amin'ny anarana hoe JPEG, dia mijoro ho an'ny Joint Photographes Experts Groups. Io no anarana nomen'ny "vondrona manam-pahaizana" hamoronana ity endrika ity. Ary inona no ataony? TSARA manery ny sary, na ireo vita amin'ny grayscale na loko, mitazona kalitao avo lenta (na dia misy fatiantoka azo amboarina).
Noho izany, miankina amin'ny kalitao tadiavinao amin'ny sary, ary miankina amin'ny programa ampiasainao, azonao atao ny mamaritra izay fatiantoka angon-drakitra hanananao, raha izany rehetra izany. Misy fiantraikany amin'ny haben'io sary io, satria mavesatra kokoa, dia avo kokoa ny kalitaony. Saingy ho elaela kokoa ny misintona, mampakatra, mamoaka na mandefa azy.
Ny tombony azo amin'ny fampiasana ny endrika JPG dia betsaka, indrindra satria io no fanitarana tohanan'ny mpanamory (ary raha ny marina dia avy amin'ny tambajotra sosialy ihany koa satria misy endrika tsy fantany). Ho fanampin'izany, somary maivana ihany io raha mitazona kalitao, ary tena mora ny mamantatra rehefa mijery sary maro.
Inona ny sary PNG
Androany, ny mpitsidika tranonkala dia manana fahaizana manohana endrika endrika maro. Ny mahazatra indrindra dia matetika JPG, GIF ary eny, PNG koa. Na izany aza, io endrika io dia misy toetra tsy mitovy amin'ny hafa, ary mety hisy fiatraikany tsara na ratsy miankina amin'ny fampiasana tianao homena azy.
PNG dia endrika sary iray izay azo aseho amin'ny fomba roa samy hafa:
PNG 8-bit. Tena mitovy amin'ny GIF izy io, izay midika fa ny sary dia mety handanja kely sy hitazomana ny hatsaran'ny kalitaony. Saingy tsy afaka mamorona sarimiaina ianao.
PNG 24-bit. Izy io dia mifandraika amin'ny toetran'ny JPG, izany hoe, afaka mamonjy sary miaraka amina kalitao sy habetsahan'ny loko mitovy amin'ity endrika hafa ity.
Ankehitriny, ny PNG dia miavaka amin'ny tehirizo ny sary amin'ny alàlan'ny famatrarana, fa tsy very kalitao. Izany hoe hanana sary avo lenta ianao. Ankoatr'izay, mifanohitra amin'izay mitranga amin'ny JPG, amin'ity tranga ity dia mamela ny mangarahara i PNG, zavatra izay tsy azo atao ao amin'ny JPG (raha ny tena izy rehefa manandrana mamonjy azy ianao dia ahodina ho fotsy ilay sosona mangarahara). Izay no mahatonga azy io no endrika voafidy indrindra hamonjy logo, sary avo lenta, na rehefa manana gradients na mangarahara izy ireo.
Ny format PNG (izay midika hoe "Portable Network Graphics") dia novolavolaina tamin'ny tapaky ny taona 1990 ary namboarina satria ilaina ny endrika hisorohana ny olan'ny GIF, nefa miaraka amin'izay dia afaka manana ny tombony rehetra amin'ny JPEG sy GIF
Avadiho ho PNG ny sary JPG
Fantatrao izao ny endrika isehoan'ny sary, tonga ny fotoana hiresahana ny fomba hanovana sary JPG ho PNG, satria misy safidy maro hanatanterahana izany. Eto no hanazavana ny maro amin'izy ireo.
Fandaharana hanovana sary JPG ho PNG
Ny safidy voalohany anananao dia ny fampiasana ireo programa azonao antoka fa hanana amin'ny solosainao. Miresaka, ohatra, izahay amin'ny Paint, Photoshop, GIMP ... na mpanonta sary satria matetika dia manohana endrika samihafa ireo.
Inona no tsy maintsy ataonao? Ny manaraka:
Sokafy ny programa izay hampiasainao.
Sokafy ny sary JPG izay hovainao amin'ny endrika hafa ao amin'ilay programa. Azonao atao ny manitsy azy raha mila na miasa miaraka aminy ianao ary tehirizo ny valiny (na tahirizo toy ny misy azy).
Fotoana izao hitehirizana azy. Na eo aza izany, tsy tokony hokapohinao ny bokotra "Vonjeo", na "File / Save", dia tsy maintsy kapohinao ny safidy "Save as". Amin'izany fomba izany, ny programa dia handika fa te-hamonjy an'io sary io ianao nefa amin'ny endrika hafa.
Ao amin'ny efijery Save As, dia hanolotra anao ny lisitry ny endrika sary mety ahafahanao mitahiry ny sary. Ny sisa ataonao dia ny misafidy ny extension PNG mba hitahiry azy amin'ny farany ary hitahiry izany amin'ny solo-sainanao amin'io endrika io.
Pejy an-tserasera maimaimpoana hanovana sary JPG ho PNG
Raha tsy te hampiasa programa informatika ianao, na satria tsy manana napetraka ianao, na satria mila atao haingana kokoa (indrindra raha misy sary maromaro azonao ovaina avy amin'ny JPG ka hatramin'ny PNG, dia mety hahaliana izany hampiasa pejy web sasany izay omen'izy ireo an'io "serivisy" io.
Raha ny marina, maro amin'izy ireo no maimaim-poana ary ny sisa ataonao dia ny mampakatra ireo sary ary hanova ny endriny ho azy izy ireo mba ahafahanao misintona azy ireo indray (tsirairay na amin'ny rakitra zip) ary azonao atao ny manana azy ireo araka ny itiavanao azy ireo.
Ohatra amin'ny pejy an-tserasera maimaim-poana hanovana sary JPG ho PNG ireto manaraka ireto:
Avadiho ny sary JPG ho PNG amin'ny finday avo lenta
Ahoana raha te hanova sary JPG ho PNG ianao? Ilaina ve ny mamindra ilay sary amin'ny solosainao aloha hiasa aminy sy hanovana azy? Sa azonao atao amin'ny finday iray ihany io?
Eny eny, afaka manao izany ianao. Mba hanaovana izany dia manana safidy maromaro ianao:
Azonao atao amin'ny fampiharana izany, toy ny Photo Converter; Mpanova sary sy sary jpg pdf eps psd, png, bmp…; Mpanova sary, sary mankany JPG / PNG, PNG Magic ...
Safidy hafa izany amin'ny alàlan'ny browser, amin'ny fampiasana pejy toa ireo efa noresahinay teo aloha, saika izy rehetra koa dia miasa amin'ny endrika finday.
]]> https://www.creativosonline.org/convertir-una-imagen-jpg-a-png.html/feed 0